इन्सपेक्टर पिताले डीएसपी छोरीलाई सल्युट गरेको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल – Sandesh Press
January 5, 2021 340
सहकर्मीसँग कार्यालयको मोटरसाइकल पछाडि बसेको फोटोमाथि अनेक टिका टिप्पणी भइरहेको थियो। त्यसमाथि उनले लगाएको लुगाको आलोचना र उनको ‘चरित्र’ र ‘मर्यादा’माथि प्रश्न पनि
सोही दिन फेसबुकका नेपाली पुरुष प्रयोगकर्ताहरूको समूह (एमआरआर)मा एउटा पोस्ट गरियो। जसमा सुवोध बुढाथोकीले केही मेसेजको स्क्रिन सटसहित पोस्ट लेखेका छन् : हामीले भाइरल तस्विरको पीडित पक्षबाट केही सन्देश पाएका छौं। कृपया अब उक्त तस्विर ग्रुपमा पोस्ट नगर्नु होला। कसैले गरेको
पोस्‍टसँगै राखिएको मेसेजमा लेखिएको थियो : ‘त्यस फोटोमा देखिएकी युवती मेरी बहिनी हो। उसलाई डिप्रेसन हुन लागिसक्यो।’
त्‍यतिन्जेल उपाध्यायसहित धेरैले आफ्नो टाइमलाइनबाट उक्त तस्विर हटाइसकेका थिए। तर, रिपोस्ट गर्ने र स्क्रिनसट सेयर गर्ने क्रम रोकिएन।
ती पोस्टहरू घुमिफिरी टाइमलाइनमा आउँदा महिलालाई अत्यास लाग्यो। ‘सामाजिक सञ्जालमा अनेक खालका मानिस हुन्छन्। कसलाई सम्झाउनु? कसरी सम्झाउनु? त्यसमाथि कार्यालयबाट फोन आइरहेको थियो। तनावमाथि तनाव। मैले त फेसबुक हेर्नै छाडिदिएँ,’ उनले भनिन्।
सामाजिक सञ्जालमा साम्य हुँदै गरेको विषय मिडियाले उचाल्दा…
सामाजिक सञ्जाल हेर्न छाडेपछि ती महिला मानसिक रुपमा केही राहत महसुस भएको बताउँछिन्। केही दिनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले छलफल र टिका टिप्पणीका लागि नयाँ विषय पाए। सरकारी मोटरसाइकल र युवतीको लुगाको विषय केही साम्य भयो।
तर, केही अनलाइन मिडियाले विषयलाई पुन: उचाले। समाचार लेखे :
‘फेसबुक ट्वीटर चलाउने त फोटोमा जति देखे त्यतिबारे चर्चा गरे। तर, मिडियाले त निकै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरिदियो। गोपनीयता भन्ने कुरा नै रहेन। समाचारहरू छापिए लगत्तै फोन आएर हैरान छ। कति जनाको प्रश्नबाट भाग्नु?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
सामाजिक सञ्जालमा सीमित तनाव अब भर्चुअल दुनियाँ बाहिर पनि भोग्नु पर्ने उनको कथन छ।
घटनाका कारण युवतीलाई काममा फर्कन अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। उनी लगातार आएका फोन, प्रश्न, जिज्ञासा र दिनुपर्ने स्पष्टिकरणका कारण पनि तनावमा छिन्। परिवारले उनलाई साथ दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र समाचार नपढ्दा उनलाई पनि केही राहत महसुस भएको छ।
‘तर मैले लगाएको लुगालाई निकै ठूलो इस्यू बनाइयो। कति खेर कहाँ के चर्चा भयो वा आफ्नोबारे थप अफवाह फैलाइयो कि? भनेर हेर्न मन लागिहाल्छ,’ उनले भनिन्।
आफूलाई नचिनेरै, घटनाबारे विस्तृत केही थाहा नभएरै पनि आफ्नो पक्षमा लेख्ने र बोल्नेहरूलाई देख्दा भने खुशी छिन्। जसकारण हरेक विषयको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो हुन्छ भन्ने बुझेको बताउँछिन् उनी।
भन्छिन्, ‘बाँकी त इग्नोर गर्नुको उपाय छैन। जे भयो गलत भयो। गलत कुराको सधैं पछि लागेर सकिँदैन नि।’
लकडाउनका कारण असारदेखि काममा फर्किएकी उनी एक साता लामो बिदा लिएर काठमाडौं आएकी हुन्। घटनाले आफूलाई फरक अनुभव दिलाएको सुनाउँछिन्। भन्छिन्, ‘के केसम्म भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनुभव हो। अझै बलियो बन्न मद्दत गरेको छ।’
Prevभक्तपुरमा करेन्ट लागेका मजदुरको उद्धार गरिँदै !